Shiinaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Huipin
Madbacada Weyn ee Awoodda Shidaalka
Batroolka Yar ee Awoodda Yar
Xalka dhirta lagu farsameeyo saliida qudaarta
Cunno karinta / Kulka
Mashiinka Sifeeyaha Mashiinka
Filter Horizontal Filter for Saliid
Sisinta loo yaqaan 'Groundnut sisinta' Gabbaldayaha ...
Warshadaha Soy Bean Oil Pre ...
HP120 Awood Yar Yar Cold O ...
HP 120 Model Saliida Qabow
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Warshadaha
Awoodda Wax Soosaarka:
Mashiinka Mashiinka Muquuninta
Filimka caaga ah
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Beerka ee Warshadaha
Qaab dhismeedka ugu weyn
Qalabkani wuxuu leeyahay qaybaha ugu muhiimsan ee soo socda: uumiyaha, habka quudinta (habka quudinta saxaafadda), qafis saxafadeed iyo mashiinka fur (oo ay ku jiraan aaladda isku hagaajinta keega) iyo qalabka gudbinta.
1) Steamer Roaster:
Cooker-ka qalabkani waa seddex lakab oo wax kariya oo toosan. Waxay la mid tahay makiinadda wax lagu karsado oo toosan. Waxaa lagu rakibay cagaha taageeraya ee jir. Isugudbinta waxaa wadid hoos udhige madaxbannaan. Waxay hagaajin kartaa heerkulka iyo qoyaanka saliidda la saliiday ka hor inta aan la riixin, si markaa loo gaadho shuruudaha cadaadiska.
2) Habka quudinta:
Qaybta shaqada ee habka quudinta waxay u dhexeysaa marinka makiinadda wax lagu karsado iyo dhamaadka quudinta ee usheeda dhexe ee tuubbada. Waxay ka kooban tahay usheeda dhexe oo riixaya oo leh garbaha wareega ee hoose iyo foosto maran. Barxadda foostada faaruqinta ah, waxaa ku yaal irid xakameyn meerto ah oo lagu xakameeyo qulqulka qulqulka. Biibiile ayaa lagu rakibay irridda hoosteeda, taas oo laga arki karo xaaladda bannaan isla markaana laga qaadi karo shaybaarka billetka. Soo gudbinta waxaa sidoo kale wada hoos u dhige madaxbannaan
3) qafis saxaafadda iyo usheeda dhexe fur:
Qafiska saxaafadda iyo usheeda dhexe fur waa qaybaha shaqada ugu muhiimsan ee qalabka. Biilkii laga soo riixay mishiinka quudinta wuxuu si isdaba joog ah u galayaa farqiga u dhexeeya qafis saxafadeed iyo godka godka (oo loo yaqaan "qolka saxaafadda"). Sababtoo ah wareegga usheeda dhexe ee furka iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiibka ah ee qolka saxaafadda, billet-ka ayaa saaran cadaadis xoog leh Inta badan dufanku waa la riixaa oo wuxuu ka baxaa inta u dhexeysa barxadda saxaafadda ee qafiska saxaafadda
Wareegga mashiinka riixaya sii socoshada ma aha mid joogto ah. Fiilooyin kasta oo riixaya waxay leeyihiin dusha sare. Ma jiro wax feeraha oo riixaya. Fiiji kasta oo riixa waa la jarey (fiiri sawirka 3). "Xoq" (fiiri sawirka 4aad) ayaa lagu rakibay qafiska cadaadinaya. Ilkaha xoqitaanku waxay la jaanqaadayaan dusha sare ee dusha sare oo waxaa la gelinayaa go'itaanka furitaanka maroojinta, taas oo aan caqabad ku noqonaynin wareegga usheeda dhexe ee riixaya, Geedi socodka cadaadiska joogtada ah waa la dhammaystiray. Isla mar ahaantaana, biilkii la riixay waa la dabcay, si dariiqa saliidu u noqdo mid siman oo saliiddu ay fududahay in la sii daayo
ZY204 Caymiska pre-press waa sii-hayaha saliidda joogtada ah kaas oo ku habboon culeys-saarid leach ama riixid
laba jeer dhirta saliida khudradda, waxaana loo isticmaali jiray abuurka saliida leh sida kufsiga, looska, gabbaldayaha
abuur iyo iniin Persimmon ah.
1) Hay'ad otomaatig ah ayaa naqshadeeye taasoo keeneysa hoos u dhigida xoogsaaraha shaqada.
2) Iyada oo leh awood gacan qabasho ballaaran, aagga aqoon isweydaarsiga, shaqada isticmaalka tamarta ee hawlgalka,
maamulka iyo dayactirka ayaa loo yareeyay wakiil ahaan.
3) Keegga la riixay waa dabacsan yahay laakiin lama jabin taas oo u fiican dareeraha inuu ku faafo.
4) Boqolkiiba saliida iyo biyaha ku jira keega la cadaadiyey waxay ku haboon yihiin xallinta kala-goynta.
5) Saliida la cadaadiyey waxay leedahay tayo ka wanaagsan tii hore ee la riixriiqay ama leaterray hal saac.
Awood 65-80 tan / 24hr
(kernel gabbaldayaha ama abuurka kufsiga oo tusaale ahaan u adeegaya)
Mashiinka Korontada Y225M-6,1000R.PM
Awood 37KW, 220 / 380V, 50HZ
Cabirka guud 3000 * 1856 * 3680mm
Miisaanka saafiga ah 5800kgs
Hadhaaga saliida ku jirta keega qiyaastii 13% (xaaladaha caadiga ah)
Hore: Oilseed Steer Cooker Roaster oo ah Saliida Bakhaarka
Xiga: Qaybta Shaandhaynta Saliida Cunno Daran
Mashiinka Mashiinka Soy Bean
Waxsoosaarka waxsoosaarka saliidda beya ee soya
Sisinta Groundnut Sisinta Gabbaldayaha Rapeseeds Lawska Pu ...
Mashiinka Caanka ah ee Mashiinka Cunaya ee Ganacsi O ...
Hebei Huipin Makiinado Co., LTD
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Mashiinka Saliida Qabow, Saliida Olive, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Yar, Saliida Saliida, Saliida Saliida, Mashiinka Madbacada,